Wararka – Page 8 – UPD – Midowga Nabadda & Horumarka
Xisbiga UPD oo ka tacsiyadeeyay geeridii Wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil
March 8, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka wuxuu tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoyska, ehelada, asxaabta iyo dhamaan umadda Soomaaliyeed geeridii naxdinta laheyd ee ku timid allaha u naxariistee marxuum wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Xisbiga UPD oo soo dhoweeyay dedaalka xal u helista khilaafka diplomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya
Xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka ayaa soo dhoweeyay dedaalka xal u helida khilaafka diplomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya.
Xisbiga UPD oo biyo dhaamin ka bilaabay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
Xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka ayaa maanta oo jimco aheyd 8-3-2019 waxa uu biyo dhaamin ka bilaabay xaafado ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo duleedkeeda oo mudooyinkii dambe ay biyo yari baahsan ka jirtay kadib markii uu Webiga biyo yareeyay.
Tababar loo bilaabay hogaanada dhallinyarada xisbiga UPD ee degmooyinka gobolka Banaadir
March 4, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Waxaa maanta oo isniin aheyd 4-Mar.2019 xarunta labaad ee xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka tababar uga furmay hogaanka dhallinyarada xisbiga ee degmooyinka gobolka Banaadir, ayadoona degmooyinka Hodan iyo Dherkinley ay nasiib u yeesheen in lagu furo tababarka.
Xisbiga UPD oo xarun 3-aad ka furtay magaalada Muqdisho
March 2, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Gelinkii dambe ee maanta Sabti 2-Mar. 2019 waxaa magaalada Muqdisho laga daahfuray xaruntii 3-aad ee uu xisbiga Midowga Nabadda & Horumarkaku yeelanayo gobolka Banaadir, ayadoona munaasabadii xarig jarka xaruntan cusub ay kasoo qeyb galeen inta badan golaha fulinta ee xisbiga, xildhibaano, xubnaha xisbiga,…
Hogaanka iyo xubnaha xisbiga UPD oo dhiig u shubay walaalihii ku dhaawacmay qaraxyadii xalay ka dhacay Muqdisho
March 1, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka mudane Hassan Sheikh Mohamud oo ay wehliyeen xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka xisbiga ugu jira, xubno ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga iyo qaar ka mid ah xubnaha xisbiga oo wiilal iyo gabdho isugu jiray ayaa waxay saakay booqdeen dhaawacyada…